इञ्जिनीयर बन्न काठमाडौं आएका हिमेश कसरी बने कमेडियन ?
नेपालको पहिलो हाँस्य रियालिटी शो 'कमेडी च्याम्पियन'ले उत्कृष्ट तीन कमेडियन पाइसकेको छ । तीनै मध्येका एक हुन्- हिमेश पन्त ।
लोजिकल कमेडियनको रूपमा चिनिएका धादिङ जुँगेखोलाका हिमेश पन्त बिहीवार साँझ निकै व्यस्त देखिन्थे ।
कलंकीस्थित ह्वाइट र्‍याबिट रेष्टुरेन्टमा भेटिएका उनमा चुनावलाई चुनावले छोएको प्रष्टै देखिन्थ्यो । शीर्ष तीनमा पुगेका हिमेश पन्त, सुमन कोइराला र खड्गबहादुर पुनमध्येबाट सर्वाधिक भोट प्राप्त गर्ने एक जना नेपालको पहिलो कमेडी च्याम्पियन बन्नेछन् । त्यसैले हिमेश पनि अहिले चुनावी दौडधुपमा छन् । उनले यतिबेला बधाईसँगै सक्दो भोट हाल्ने वाचा समेत पाइरहेका छन् । त्यो उनको तारन्तार आइरहेको फोनबाट थाहा लाग्थ्यो ।
हिमेश रातारात कमेडियन भएका होइनन् । न उनलाई कसैले हाँस्यरसका ज्ञान एकाएक भरिदिए । उनी साधना र निरन्तर संघर्षका कारण 'लोजिकल कमेडियन' भएका हुन् । त्यो उनको कमेडी यात्राले बताउँछ । पढ्नमा उनी तिक्ष्ण थिए । त्यसैले सोचेका थिए- एसएलसीमा डिस्टिङ्सन आयो भने साइन्स पढ्न काठमाडौं जान्छु । नत्र यतै ।
नभन्दै उनले भनेजस्तै भयो । गरेको मेहनत खेर गएन । उनले एसएलसीमा डिस्टिङ्सन नै ल्याए, स्कूल टपे । अनि विज्ञान पढ्न काठमाडौं हानिए ।
विज्ञाननै किन भन्ने लोकान्तरको प्रश्नमा उनले भने, 'मेरो सोच इञ्जिनीयर बन्ने थियो । त्यही भएर प्लस टू मा विज्ञान पढेँ ।'
इञ्जिनीयरिङका लागि इन्ट्रान्स दिए । तर उनकै कमेडी भाषामा भन्ने हो भने 'निकै माथि' नाम निस्कियो । उनले पैसा तिरेर पढ्नुपर्ने भयो । स्कलरसिप पाएनन् । अनि उनले पैसा तिरेर इञ्जिनीयरिङ पढेनन् ।
प्लस टू पढ्दापढ्दै उनलाई कमेडीले तानिसकेको थियो । हिमेशले स्ट्याण्ड अप कमेडी हेर्न थालिसकेका थिए, त्यो पनि हलिउडको ।
केभिन हार्टको म अहिले पनि ठूलो फ्यान हुँ । उसको इनर्जी र कन्फिडेन्स एकदमै बबाल छ,' उनले भने, 'उसको इनर्जी फ्लोबाट म इस्पायर भएको हुँ ।'
केभिनको भिडियो हेर्दाहेर्दै उनलाई पनि अब म पनि स्ट्याण्ड अप कमेडी गर्छु भन्ने लागिसकेको थियो रे ! तर इञ्जिनीयरिङमा नाम ननिस्कनु नै उनको कमेडी यात्राका लागि सहज बन्यो । किनकि उनले बीएस्सीमा केमेस्ट्री पढे । कारण थियो- इञ्जिनीयरिङमा जस्तो मेहनत नि गर्नुपर्दैन, अनि कमेडी भिडियो बनाउन पाइन्छ ।
स्ट्यान्डअप कमेडी गर्ने सोच त बनाए उनले । तर अहिले जस्तो प्लेटफर्म थिएन । न कमेडी सर्कल थियो न नेप्स ग्याजम नै । त्योबेला उनले योजना बनाएका थिए, 'कमेडी गर्ने प्लाटफर्म नेपालमा छैन । मै शुरू गर्छु ।'
अनि उनले यूट्युबमार्फत कमेडी शुरू पनि गरे । कमेडी च्यानलबाट नभई अरू नै च्यानलबाट गरे । सफल भएनन् । राम्रो भ्यूज आएन । अरूअरू विषयवस्तुका भिडियो हालेको च्यानलमा कमेडीका चलेन ।
तर पछि स्यान्डअप कमेडीकै एउटा छुट्टै च्यानल 'कमेडी सर्कल' आयो ।
उनी त्यहाँ गए । उनकै भाषामा भन्ने हो भने त्यहाँ अडिसनजस्तै लिइयो । 'मेरो कन्फिडेन्स देखेर म सेलेक्ट भएँ । मैले त्यो च्यानलमार्फत कमेडी भिडियो बनाउन पाउने भएँ,' उनले कमेडीका शुरूआती दिन सम्झिए, 'मैले केपी ओलीको भ्वाइसमा अंग्रेजी बोलेँ, कमेडी हानेँ । यो सब इम्प्रेस पार्नका लागि थियो ।' पछि उनलाई कमेडी सर्कलबाट फोन आयो- तपाईं सेलेक्ट हुनुभयो । हामीलाई तपाईंको कन्फिडेन्स दामी लाग्यो । अनि उनको कमेडी यात्रा बुलेट ट्रेनको गतिमा अघि बढ्यो ।
तर कमेडी सर्कलमा भिडियो आउने भएपछि अन्त स्यान्डअप कमेडी नगर्ने भन्ने सामान्य नियम थियो । त्यसैले उनी आफैंले 'हिमेश पन्त' नामको यूट्युब च्यानल खोले र सिट डाउन कमेडी गर्न थाले ।
कमेडीमा संघर्ष गर्नेहरूका लागि कमेडी च्याम्पियन 'ठूलो प्लेटफर्म' हो । यो हिमेशलाई पनि लाग्यो । यो रियालिटी शो आउँदैछ भन्ने उनले थाहा पाए । उनी कमेडी सर्कलमार्फत चिनिइसकेका थिए । जसबाट उनको फ्यान फलोइङसमेत बनिसकेको थियो । युवाले उनको कमेडी भिडियो खोजीखोजी हेर्न थालिसकेका थिए । एक खाले युवाको जमातमाझ सेलेब्रिटी मानिरहँदा हिमेश कमेडी च्याम्पियनमा जाने कि नजाने दोधारमा परे । साथीहरूसँग सल्लाह पनि मागे । केहीले कमेडी च्याम्पियनमा जान सुझाव दिए केहीले नजान । दोधारकै बीच साथीको जोडबलमा उनले भिडियो पठाए । सेलेक्ट भए ।
तर भइदियो के भने उनीसँगै कमेडी गरिरहेका साथीहरूले पनि सोही रियालिटी शोमा भाग लिएका रहेछन् । त्यो उनलाई थाहा थिएन । क्षितिज केसी, सजन श्रेष्ठ र आदर्श मिश्र आएको उनले थाहा पाए ।
उनले आफ्नो टक्कर नयाँसँग भन्दा पुराना साथीहरू सजन, आदर्शसँग हुने अनुमान गरेका थिए । तर त्यसो भएन । उनीसँगै फाइनलमा सुमन कोइराला र खड्गबहादुर पुन पुगेका छन् ।
मानिसहरूले हिमेशलाई छाडा बोल्छ भनेर केहीले आलोचना समेत गर्ने गरेका छन् । तर उनी यसलाई मान्दैनन् । उनी भन्छन्, 'कन्डमको जोक हान्नु छाडा हो जस्तो लाग्दैन । मैले बढी गरेको भनेको त्यही हो ।'
उनी कमेडी च्याम्पियनमा छाडा बोलेर दर्शक हँसाउनु हुँदैन भन्ने लाइनमै छन् । भन्छन्, 'कमेडी च्याम्पियनमा छाडा बोल्नुहुँदैन । त्यो म पनि मान्छु । किनकि यो फ्यामिली शो हो ।
तर कमेडी सर्कलका दर्शकका हकमा भने त्यस्तो नहुने उनी बताउँछन् । 'कमेडी सर्कलमा छाडा बोल्न हुँदैन भन्ने होइन । त्यसमै डिस्क्लिमर लेख्या हुन्छ । इयरफोन लगाउनुपर्ने हो कि के हो त्यो सब भनिएको हुन्छ । त्यसको अडियन्स नै त्यस्तै हुन्छ,' उनले थपे, 'हाम्रो भिडियो हेर्ने भनेको प्राय: यूथले हो । राम्रो भ्यूज आएको छ, राम्रो कमेन्ट आइरहेको छ भने त्यो मन पराएरै भएको हो ।'
'राजनीतिक विषयवस्तुमा बढी फिलिङ्स आउँछ'
कमेडी च्याम्पियनमा हिमेशको प्रस्तुति हेर्ने हो भने उनमा राजनीतिको राम्रो ज्ञान भएको देखिन्छ । त्यसैले उनी राजनीतिक कन्टेन्टमा राम्रो पञ्च हानेर दर्शक हँसाउन माहिर छन् । भन्छन्, 'स्कूल लेभलदेखिनै राजनीतिमा म धेरै चासो राख्थेँ । पोलिटिकल कन्टेन्ट मैले प्रिजेन्ट गर्दा खेरि इमोसनल्ली बढी अट्याच्ड हुन्छु । मलाई पोलिटिकल कन्टेन्टमा बढी फिलिङ्स आउँछ । त्यो कारणले गर्दा म राजनीतिक इस्युमा बढी हँसाउन सक्छु । राम्रो पञ्च हान्न सक्छु ।'
उनी जोक वा सटायर हान्दा शक्तिमा बसेको मान्छेको गरिने बताउँछन् । भन्छन्, 'पावरमा भएको व्यक्तिलाई जोक हान्दा बढी इफेक्टिभ हुन्छ । जसको नामै सुनिएको हुँदैन, त्यसलाई जोक हानियो भने हाम्रो केन्टेन्ट फ्लप जान्छ । तर पनि मैले ब्यालेन्स गर्नलाई पावरमा भएको व्यक्तिलाई मात्रै नभई अरूलाई पनि जोक हानिरहेको छु ।'